Antenimierampirenena :: Depiote roa noesorina tsy ho isan’ ireo olom-boafidy intsony • AoRaha
Antenimierampirenena Depiote roa noesorina tsy ho isan’ ireo olom-boafidy intsony
Novalian’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC), omaly, ny fangatahana nataon’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine, manoloana ny fahabangantoerana, tetsy Tsimbazaza.
Nankatoavin’ny HCC ny fanesorana ny depiote voafidy tany Mahabo, Raveloson Ludovic, izay mbola karohina noho ny raharaham-pitsarana maro miandry azy sy Rasolomampionona Hasimpirenena, voafidy tao Fandriana saingy voatana am-ponja vonjimaika etsy Antanimora noho ny fiahiahiana azy amina raharaha fivarotana tany sy tranom-panjakana.
“Mitombina ny fitakian’ ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine, momba ny filazana fa naman’ny manala tena ny solombavambahoaka tsy tonga mivory mandritra ny roa volana kanefa tsy manana fahazoan-dalana sady tsy nandefa solontena. Esorina tsy ho solombavambahoaka intsony, araka izany, Raveloson Ludovic sy Rasolomampionona Hasimpirenena”, hoy ny HCC.
Fantatra, omaly, ihany koa, ireo lisitra faharoa hisolo toerana an’iretsy farany, eny Tsimbazaza “Tendrena ho depiote vaovao any Mahabo, Razafindrazalia Yvonne, lisitra faharoa ao amin’ny antoko mahaleo tena Leva, tamin’ny fifidianana depiote, tamin’ny 27 mey 2019. Voatendry ho depiote vaovaon’i Fandriana kosa, Rakotomalala Dina, lisitra faharoa ao amin’ny antoko Isika rehetra manara-dia an-dRajoelina (Ird)”, hoy hatrany ny HCC.
Afaka miverina mandray ny toerany kosa i Volahaingo Marie Thérèse, minisitry ny Fanabeazana teo aloha.